Honor Band 5: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Herinandro lasa izay dia nambara fa ny Honor 9X dia tsy ho tonga irery, fa ny taranaka vaovao bracelet an'ny marika kosa no haseho. Ity bracelet ity dia ny Honor Band 5, izay hainay farany fantatra amin'ny fomba ofisialy. Raha herinandro lasa izay ny ankamaroan'ny famaritana dia efa tafaporitsaka mitovy amin'izany, fa izao dia ofisialy daholo ny momba an'io bracelet io.
Ny Honor Band 5 dia havaozina, miaraka amina endrika vaovao sy fiasa vaovao. Fehin-tànana antsoina hoe iray amin'ireo mpifaninana lehibe amin'ny Xiaomi Mi Smartband 4 eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Manao tsara eo amin'ny sehatry ny asany izy io, ary miaraka amin'ny vidiny mifanaraka amin'ny tsena. Izay rehetra tadiavin'ny mpampiasa.
Somary lehibe kokoa ny écran amin'ity indray mitoraka ity, ankoatry ny maha efijery miloko azy. Ka io no taranaka voalohany amin'ny marika sinoa manana an'ity karazana efijery ity. Ny loko isan-karazany koa dia ampidirina amin'ny fehikibony, araka ny efa hitantsika. Ka havaozina ny endrika, amin'ny fomba manintona kokoa ny mpanjifa.
Honor 9X sy 9X Pro: Ny marika afovoany vaovao an'ny marika
1 Famaritana Honor Band 5
Famaritana Honor Band 5
Ny sasany tamin'ireo famaritana an'ity Honor Band 5 ity dia tafaporitsaka roa herinandro lasa izay. Misaotra an'ity sivana ity fa efa azontsika atao ny mamantatra hoe inona no hamela antsika ny marika sinoa hametraka antsika amin'ity bracelet vaovao ity. Misy fanatsarana mazava aotoy ny fampiasana tontonana AMOLED lehibe kokoa. Ho fanampin'izany, voamarina fa mahita asa vaovao ao isika, izay ahafahana mampiasa tsara kokoa amin'ny fotoana rehetra. Ireto ny fiparitany:
Fampisehoana AMOLED 0,95-inch
43 x 17,2 x 11,5mm refy
Milanja 22,7 grama
Lentika hatramin'ny 50 m ny halaliny
Sensors handrefesana ny tahan'ny fo sy ny fiasa, ny haavon'ny ôksizena ao amin'ny ra
Mifanaraka amin'ny Android 4.4 sy ambony, iOS 9.0 sy ambony
Andininy miaraka amin'ny NFC ary tsy misy NFC
Ny Honor Band 5 dia natolotra ho fehin-tànana ho an'ny atleta. Satria hamela antsika hampiasa azy io amin'ny fanatanjahan-tena isan-karazany. Izy io dia manana fahaizana mamantatra fomba fanatanjahan-tena folo isan-karazany, toy ny bisikileta, milomano, fampihetseham-batana sasany, na hazakazaka anaty sy ivelany. Ka izany fehin-tanana hialana betsaka. Raha ny lomano, araka ny efa fantatrao, dia hilentika hatramin'ny 50 metatra ny halaliny. Azo ampiasaina tsy misy olana noho izany.
Ny bracelet dia manana sensor izay manara-maso ny tahan'ny fo amin'ny fotoana rehetra, ankoatry ny fananana mpanara-maso torimaso. Hanome antsika angona ihany koa ny amin'ny halavirana lavitra sy ny kaloria nodorana, toy ny mahazatra amin'ity karazana vokatra ity. Ny batterin'ity Honor Band 5 ity dia manana fahaizana 100 mAh, izany dia hanome antsika hatramin'ny 6 andro fizakan-tena, araka ny filazan'izy ireo avy amin'ny firm, raha ampiasaintsika ao aminy ny tahan'ny fo. Halefa amina kinova roa izy io, ny iray amin'izy ireo miaraka amin'ny NFC ary ny iray tsy misy NFC.
Ny Honor Band 5 dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Shina. Amin'izao fotoana izao dia tsena tokana nanamafisana ny fandefasana azyRaha ny marina dia efa azo vidiana eto amin'ny firenena ilay kinova tsy misy NFC, amin'ny tranokala samihafa. Amidy amin'ny loko telo izy io, izay no hitantsika tamin'ny sary (manga, mainty ary mavokely). Izy ireo ihany no misy loko.
Amin'ny tranga any Sina, ny kinova tsy misy NFC dia amidy amin'ny vidiny 189 yuan (25 euro hanovana bebe kokoa na latsaka). Raha ny kinova miaraka amin'ny NFC dia natomboka tamin'ny 29 Jolay, miaraka amin'ny vidiny 219 yuan (29 euro novaina). Amin'izao fotoana izao dia tsy misy daty hanombohana ny fehin-tànana any Eropa, na dia antenaina aza fa ho tonga izy.
Roa herinandro lasa izay dia namoaka ny famaritana an'ity Honor Band 5 ity, satria navoaka tao amin'ny Amazon Germany. Raha izany no izy vidiny amidy 59,90 euro amin'ny kinova tsy misy NFC. Ho fanampin'izay, tombanana fa azo alefa amin'ny 15 Aogositra, farafaharatsiny any Alemana. Saingy hatreto ny orinasa dia mbola tsy nilaza na inona na inona momba ny fandefasana azy any Eropa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Honor Band 5: Ny brasele hetsika vaovao an'ny marika
Ny vidin'ny ASUS ROG Phone II sy ny daty famoahana dia nambara
Ny tetika tsara indrindra hanatsarana ny audio an'ny Samsung Galaxy miaraka amin'ny UI iray